Umthandazo wokudambisa umyeni. ? [Ukubuyisela umtshato wakho]
Umthandazo wokuthoba umyeniUkugcina imvisiswano ekhaya kuhlala kungumsebenzi onzima kwaye ngamanye amaxesha kufuna uncedo oluvela kuThixo. Umthandazo wokudambisa umyeni yizisa unyamezelo ngakumbi, ukuzola kunye nokulingana kuthando lwakho.
Umntu ngamnye usabela ngendlela eyahlukileyo kwiimeko ezinzima ebomini. Ukuba umyeni wakho ufumana uxinzelelo olukhulu emsebenzini okanye izinto zingahambi ngendlela ebezicwangciselwe yena, thetha lo mthandazo wokuthoba umyeni onengxaki.
Kuqhelekile ukuba lonke uxinzelelo lwamaxesha anzima abuyiselwe kwimeko yosapho. Ukuba iqabane lakho lithe lasweleka kakhulu, umthandazo wokuba indoda enomsindo nengxamisekileyo ifike ngexesha lakho.
Ngokholo kuya kuba nakho ukubuyisela imvisiswano ekhaya kwaye umtshato wakho uya konwaba ngakumbi.
1 Umthandazo wokuthoba umyeni
2 Umthandazo wokutyisa umyeni ongxamisekileyo
3 Umthandazo ka-Saint Amanso wokuthoba umyeni
4 Umthandazo kumyeni wasekhaya - uStame Tame
5 Umthandazo kumyeni wasekhaya - uCatherine uCatherine
6 Indlela yokuthandaza ukuthoba umyeni
“Nkosi, ndingena kubukho bakho ngoku. INkosi inkulu, iNkosi inamandla, INkosi inye. Akukho thixo ngaphandle kwakho kwaye nguwe kuphela onokunceda ekwenzeni umtshato wam ube yimpumelelo. Ndincedise umyeni wam ukuba abe yindoda engcono, ezolile, andiphathe ngentlonipho engaphezulu, enze ngcono kum kunye nabantwana bethu. Kukufundisa indlela yokuphucula njengomyeni, njengotata, njengentloko yekhaya. Ndifuna umtshato wam ube yimpumelelo, kodwa obu bunzima buyaphazamisa kulwalamano lwethu. Kwaye ndiphe ubulumko ukuze ndikwazi ukujongana nomyeni wam ngeenjongo zokubona isimo sam sengqondo kwaye ndiphefumlelwe ukuba ndiphucule, ukuzola, ukucaphuka, ukuthanda abanye kunye nabahlobo bam. Enkosi kwangaphambili ngentsikelelo endiya kuyifumana. Kwaye ndiyakucela kwakhona ukuba undifundise indlela yokwenza ngokuchanekileyo kunye naye ukutshintsha umendo wakhe. Amen.
Umthandazo wokutyisa umyeni ongxamisekileyo
“Owu, bangcwele abanamandla!
Ukuze uqonde ukukhala okuphuma entliziyweni yam.
Oko kungaluva uthando endiziva ngalo (umzekelo, igama lomntu amthandayo).
Ndiyakucela, undincede uboyise (yitsho igama lomntu othandekayo) ngokuqinisekileyo, kuba (thetha okwenzekayo ebomini bakho) kwaye uve ukuba ndingakuphulukana naphakade!
Ndithethele, thambisa intliziyo yakho ekhangeleka ngathi lilitye!
Nokuba i-esile silile ikhe yachukunyiswa nguwe, ke ndiyazi ukuba isicelo sam sinokwenzeka. Amen
Umthandazo ka-Saint Amanso wokuthoba umyeni
Umthandazo kumyeni wasekhaya - uMarko oNgcwele
«(Yitsho apha igama lomntu ofuna ukumzolisa),
Ngamana uMark oNgcwele angakuthoba kwaye ukhulule umsindo kunye nobushushu obuhlala ubuphethe ngaphakathi ngaphakathi, obuthambisa umoya nomphefumlo wakho.
(Yitsho apha igama lomntu ofuna ukuzola),
UMark oMkhulu uye watshabalalisa iingonyama, iinyoka kunye nezidalwa ezingenakufikelelwa kwaye ngamandla akhe unakho ukumbambisa, alawule ingqumbo yakhe, umsindo wakhe nazo zonke iingxinano awayehlala eziphethe.
ISan Marcos inokuchukumisa intliziyo yakho, yenze ithambe, ibe lula kwaye ibe nemvakalelo engakumbi.
Iya kuchukumisa umphefumlo wakho kwaye ikhulule kubo bonke ubushushu kunye nayo yonke imvukelo ebandakanyekileyo.
Iya kuwenza lula umzimba wakho, ukhululeke ngakumbi kwaye uzole.
UMark uza kusebenzisa onke amandla akhe ukuzola uze uphelise wonke umsindo owawunawo ukususela oko wazalwa. Kuya kulususa olu phawu lubi kangaka ukuba ungumntu owahlukileyo, umntu ongcono nozolileyo.
(Chaza igama lomntu ofuna ukuzola),
Ndifunga kuYesu Krestu ukuba uwuthwele umnqamlezo ngokubandezeleka okukhulu kangaka ukuba uyakuvuya kwaye aphelise ubomi bakhe bonke, ukuba uya kuba ngumntu owahlukileyo ukususela ngoku kwaye akangekhe azive enexhala njengakuqala.
Uya kuwukhupha wonke lo msindo kube kanye kwaye ube ngumntu ongcono nozolileyo.
Umthandazo kumyeni wasekhaya - uStame Tame
«(Yitsho igama lendoda enovalo),
Ngamana i-Meek ye-Holy Meek inokumakisha, kwanga u-Meek angakuthoba wena kwaye uYesu Krestu angakuthoba.
Ngamana i-Holy Tame ingabususa obu bushushu nengqumbo ethi ikhuphe abantu abangalunganga ngamanye amaxesha.
(Chaza igama lendoda enomvandedwa),
Ngamana uSanta Meek angabamba lo msindo ubushushu bomshiye. Ngcwaba zonke iingxaki zakho kwaye ulungise ngalo lonke umsindo onxulumene nazo.
Kwangathi i-Tame enamandla enamandla kwaye inobulumko ikwazi ukulawula le mpela imbi ihlekisa usapho lwakho kwaye ikuve ukhathazekile.
I-Tame eNgcwele iya kukuphilisa, iphelise yonke le ingqumbo, yonke le ntlungu kwaye ikwenze ube namandla okujamelana nazo zonke iingxaki zakho ngaphandle kokuba nomsindo nengqumbo ngaphandle kwesizathu.
I-Tame eNgcwele, iphilisa wonke umsindo womyeni wam, imnike elona xesha linzima nelinzima lobomi bakhe.
Nceda umphefumlo wakho, umntu kunye nobuntu bube bhetyebhetye ngakumbi kwaye unyamezele izinto ezimbi ezizayo.
I-Saint Tame iya kukudambisa, ikuthomalalise kwaye isuse zonke izinto ezimbi onazo.
Umthandazo kumyeni wasekhaya - uCatherine uCatherine
“Santa Catarina, wena obandezelekileyo kakhulu ebomini bakho, wena ogqithileyo kwinto ekungafanelekanga ukuba ugqithe kuyo, ndicela ujonge ngaphakathi kum kunye nosapho lwam undincede ngomyeni wam (yatsho igama elipheleleyo lomyeni).
Unovalo kakhulu, unomsindo omkhulu kwaye unomsindo, kwaye ndiyazi ukuba andinakonwaba.
Ndinqwenela ukulinika ithuba, kunye nokunye okuninzi, ngenxa yoko ndiyakucela ukuba undinciphise.
Yolisa umyeni wam uSanta Catarina, yithobise intliziyo yakhe, uzolile iingcinga zakhe.
Kukunceda ukuba ukwazi ukujongana namaxesha anzima kakhulu ebomini bakho, ngakumbi awonaxinzelelo, kwaye uthintele imithambo yakho ekuqhumeni yonke imihla, ubusuku nemini yonke.
Inika ukuzola entliziyweni yakho, ikunike isiqabu engqondweni nasengqondweni kwaye ifihle zonke iingcinga ezimbi ezikwenza ukuba ube nexhala.
Ndincede ngolu suku lubi iSanta Catarina.
Ndincede, usapho lwam kunye nomyeni wam ukuze ekugqibeleni sonwabe.
Ndiyakholelwa kuwe Santa Catarina. Amen
Indlela yokuthandaza ukuthoba umyeni
Imithandazo yasekhaya eboniswe apha inokuthandazelwa kunye okanye ngokwahlukeneyo. Ngokubathandazela, uya kuzola ngelixa ecela uncedo lokuqinisekisa umyeni wakhe.
Ukuba ufuna ukuyithetha le miphefumlo kwiingcwele ezahlukeneyo, akukho ngxaki nakanye. Oku kulungile kuba kuya kwandisa amathuba okufezekiswa kwesicelo sakho.
Umthandazo wokuthambisa indoda unokwenziwa yonke imihla. Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ungene ngexesha elithile kwinkqubo yakho ukuze uhlale ukhumbula ukuthandaza. Okukhona uthandaza, kokukhona unxibelelana noThixo.
Xa uthandazela ukonwaba umyeni, kufuneka ube nokholo olukhulu kwaye ukholelwe ukuba iNkosi iya kuthatha amanyathelo ukwenza umlingane wakho azole kwaye azole, nokuba ithini na imeko yakho.
Kodwa lumka: Isivakalisi sisebenza kuphela xa injongo yaso ilungile. Ukuba ufuna ukuzolisa umyeni wakho ukwenza umtshato wakho uphumelele, kwaye abe yindoda engcono, ke wena usendleleni elungileyo.
Kodwa ukuba ufuna ukuzolisa umyeni wakho ukuze abe sisicaka sakhe, yazi ukuba lo mthandazo awuyi kusebenza kwaphela. Umthandazo wokwazisa umyeni usebenza kuphela xa injongo yentliziyo yakhe ilungile.
Konwabele ukufaka lo mthandazo kwindlela yakho kwaye uhlambe nevidiyo elandelayo eza kuzisa uxolo kusapho lwakho.
Funda kunye Umthandazo wokubuyisela umtshato.